Guulaha uu gaaray Dr Abiyi Axmed muddadii Koobnayd iyo Dib u Gurashada Deegaankeena oo Maraysa 99% korna usii Socota! – Xeernews24
Guulaha uu gaaray Dr Abiyi Axmed muddadii Koobnayd iyo Dib u Gurashada Deegaankeena oo Maraysa 99% korna usii Socota!
10. Juni 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waxay ahayd markii loo magaacabay Dr Abiyi Axmed 2 dii April, 2018 xilka ra’iisal wasaarenimo. Wuxuu jeediyay khudbad ay ka muuqatay qiiro fara badan iyo niyad samaan. Isla markiiba dadka wax faalleeya ayaa badankoodu ula booday inay ku macneeyaan hadalkii macaanaa ee looga bartay madaxda Afrika markay xukun doonayaan ama ay ku guulaystaan xil hanashadii. Hase yeeshee waxaad moodaa inuu ra’iisal wasaaruhu dhammaan wixii u ballan qaaday mid mid isku dul taagayo, marka laga reebo xaalka deegaankeena oo kasii daraya.
1. Wuxuu ra’iisal wasaaruhu safarro aan kala go’ lahayn ku marayay waddamada geeska marka laga yimaado safaradii uu dalka gudihiisa kusoo kala bixiyay. Qayb ahaan wuxuu dagaal kula jiray musuqa aan xadka lahayn ee ay ku keceen dad shaati dawladeed gashanaa oo si aan hore loo arag waddanka u boobay/Bililiqaystay. Wuxuu daba socday halka ay mareen lacago balaayiin dollar ahaa oo lagu daldalay sidii qamadida oo kale waddamada jaarka sida Djibouti, Sudan iyo Kenya. Natiijo fiican baanu kasoo gaaray oo waxna waa la dul istaagay waxna waa lagu daba jiraa. Tanu waxay qayb k ahayd dagaalka uu kula jiro musuqa baahsan ee ragaadiyay wadanka xilligii ay TPLF gadhwadeenka ka ahayd
2. Wuxuu ra iisal wasaaruhu soo dhisay dawlad ka jawaabtay su’aalihii ay shacabka oromadu qabeen oo ahayd inaanay helin xaqoogii awood qaybsiga kaga aadanaa. Walow aannaan anaku ka soomaali ahaan la qabin inaan xaqeenii helnay haddana taasi waa mid ay ku dhaliilan yihiin dadka systemka maanta shaqaynaya inoogu jira.
3. Waxaa istaagay kacdoonadii faraha lagaga gubtay ee keenay in wadanku qarka u fuulo burbur loo maara waayo. Waxaana dejiyay dadka oo marwalba jawaab ka helayay codsiga ay dawlada u gudbistaan.
4. Ra’iisal wasaaruhu wuxuu ku guulaystay shayga ugu muhiimsanaa ee ahaa kalsoonida dadku dawladu ku qabaan inuu dib uusoo nooleeyo, kalsoonidaa oo aad meesha ugu baxday intii ra’iisal wasaarihii isaga ka horreeyay uu xafiiska joogay maadaama oo ballan qaadyada uu samaynayay ahaayeen kuwo aan intooda badan waxba laga arag.
5. Waxaa oodda laga qaaday maxaabiistii u xirixirnayd siyaasada oo gaadhaysa kumanyaal. Qaarkoodna ay ku xukunnaayeen di loo loo cuskaday xeerasha gabood falka ku dhisnaa ee TPLF ku cabudhinaysay dadka iyo guud ahaan dalkaba.
6. Waxaa albaabada la iskugu dhuftay oo la xiray xabsigii caanka ahaa ee Ma’akalawi ee duleedka Addis ababa, waa xabsi ku caan baxay gabood falka xuquuqda aadanaha iyo jidh dilka ay ku kacayeen xukuumadihii hore ee Dergigu kamidka ahaa
7. Waxaa isbdel lagu sameeyay Fedral Policeoo ahaa meelaha ay isticmaali jireen TPLF si ay u fushadaan danahooda gaarka ah, waxaa u kala sarsareeyay oo gacanta ay ugu jireen general iyo Kornayl Tigre ah oo u dhega nugul TPLF kaliya
8. Waxaa saaxada siyaasada ka baxay nimankii ku kaalaxay boobka iyo sad bursiga ee TPLF-ta sida Abay Tsehaye, Sabhat Nega, etc. Waa niman aad isku mahadiyay una arkayay inay iyagu dadka iyo dalkaba leeyaihiin oon lagu tarraxin.
9. Ugu danbaytiina waxaa maalin ka hor loo xiiray #General Samora iyo Getachew oo kala ahaa hoggaamadii ciidanka iyo sirdoonka, waxaa lagu xasuusan doonaa inay dhiig badan daadiyeen kumanyaal badan bara kiciyeen oo kala joogay Deegaanka Soomaalida, Gambeelada iyo Oromada haba lakala badsado dhibkee.
10. Waxaa iyaduna arrin aad loo sugayay labaatankii sano ee lasoo dhaafay ahayd xalka xuduudda Eritrea iyo Ethiopia. Ra’iisal wasaaruhu wuxuu ku dhiiraday inuu aqbalo heshiiskii Algers oo hadda ka hor Eretria aqbashay laakiin Ethiopia diidanayd.
Tobanksaas qodob haddaad u fiirsato waxaa kuu caddaanaya in nimankii ku amar ku taaglayn jiray xukunka 27kii sano ee lasoo dhaafay inuu ku dhacay Tsunami siyaasadeed oo xaalkoodu marayo maxaa layiri iyo maxaa inala gudboon. Waxaana soo baxaya ifafaalo ah inuu ra’iisal wasaaruhu malaha leeyahay “Ninkastoo lawga kaa gubay adiguna laabka ka gub”
#Dibu-gurashada Deegaankeenna oo Maraysa 99% Korna u Socota
Madaxweynaha deegaanka oo aad moodo khalkhal inuu ku dhacay taniyo intii oo Dr Abiyi qabtay hoggaanka wadanka ayaad moodaa in xaaladuhu kasii dareen oo dhinaca kale aynu u socono. Dadbadan yaa is weydiinaya horta inaku miyaynaan Ethiopia-yada lasheegayo ku jirinba?
1. Waxaa soo shaacbaxay kascdoonkii #Barbaarta gobollada kala duwan ee deegaankeena, isla markiiba waxaa lagu billaabay xarig iyo isir beegsiaan loo aaba yeelin. Waxaa maalin walba la xiraa hormooyin cusub oo dhallin yaro u badan loona aanaynayo inay qayb ka yihiin kacdoonka. VIVA #BARBAARTA
2. Waxaa dhacay dilal lagula kacay dad si nabada u mudaaharadaya, dawlada deegaanku marna kama bixiso jawaabo su’aalaha iyo dalabaadka shacabka
3. Waxaa la sheegay in shacab badan oo xabsiga ku jiray la soo daayay, xaqiiqduse taas waa ka duwanayd oo waxaa loosii qaaday xabsi hor leh oo waliba lagu shaqaysanayo
4. Isku dhacyadii Oromoda iyo Soomaalida ayaa dib loosoo nooleeyay, maalmahan ugu danbeeyay waxay xabadu kasocotaa meelo aan sidaa uga fogayn caasimada deegaanka ee Jigjiga.
5. Dawlada deegaanku waxay xoogga saartay oo lacago lagu bixiyay abuurista kooxo dadka ka caaya baraha bulshada iyadoo waxa kaliya ee lagu qiimeeyo shaqaalaha uu yahay inuu hebel soo caayay iyo inay heblaayo wax ka sheegto. Ninba ninka uu ka caraatan foolxun yahayna wuu ammaanan yahay agtooda.
6. Waxaa soo Caanbaxay oo dalka iyo dibadaba iskaga yimid Dulmidiid oo markii ugu horaysay ku sugan caasimada wadanka ee Addis Ababa. Kooxda maamulka jijiga way liqi kari la’yihiin ilaa maanta sida taasu ku dhacday. Waxay isku dayeen inay afduubaan, u hanjabaan, xirixiraan laakiin wax sidaa u buuran oo u suurto galay majiro. VIVA DUMIDIID
7. Waxaa gobolka kasoo barakacay cuqaashii iyo wax garadkii kadib markii si gooniya loo beegsaday isla markaana ay cabiri kari waayeen waxay tabanayaan iyagoo jooga deegaanka.
8. Waxaa ka dhacay dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Taysiir AHU oo kor usii qaaday gadoodka shacab eeka jira deegaanka
9. Waxaa intooda badani xarkaha goosteen jaaliyadihii faraha badnaa ee dibadaha uu ka aas aasay ka dib markii ay u adkaysan waayeen waxaa meesha ka socda
10. Madaxweynaha iyo maamulku waxay ku jiraan kolba hala guuro iyo shir heblaayo halagu qabto, iyo car wakaase ninkan Ormoda ahi wax ha keeno, iyo hebel hebel halagu bedelo, iyo ….waxaan aan ka gayn waayay Qubanaha dawlada qayraansan….
Markaad is barbar dhigto dibu dhaca inagu habdsaday ee inagu socda iyo sida la inooga sii tagayo ee aynu dib ugu harayno waxaa kuusoo muuqanaya sawir aan fiicnayn oo ah inaan waligeenba ahaanayno kuwo dib u haray.
Si aan taas uga badbaadno waxaa muhiima inaan guntanno oo dulmiga iska qaadno, cid inoo soo socotaa iima muuqato oo waxaa la dhihi jiray “geedwalba in gubtaa way hoostaallaa” . Waxaynu u baahanahay inaynu ku midowno Soomaalinimo iyo waxaa inoo dhexeeya ee ah dhaqanka suuban iyo islaamnimada. Ugu danbaytiina aynu dhammanteen isku taagno inaynu dulmiga iska kor qaadno oo sii labanlaabno dadaalkeena meelwalba iyo goorwalba oo aynu joogno. Markaan inaga ficilka la nimaadno oo waxaan doonaynaa u uxaq ayhay ilaahana waa inagu garab gelayaa…
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/Mohamed-sheekh-Osman.jpg 240 240 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-10 12:04:162018-06-10 12:04:16Guulaha uu gaaray Dr Abiyi Axmed muddadii Koobnayd iyo Dib u Gurashada Deegaankeena oo Maraysa 99% korna usii Socota!
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay Nashqada Lacagta cusub ee la soo daabacayo... Amar kasoo baxay Duqa Muqdisho oo lagu bur buriyay Dhismaha Piazza Libera (Daawo...